चर्चितसँग सेल्फी रहर- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
चर्चितसँग सेल्फी रहर
कतारको एक होटलमा काम गर्ने नवाङ लामा चर्चित व्यक्तिसँग सेल्फी खिचाइहाल्छन् । उनले सेल्फी खिचाएको चर्चित व्यक्तिको सूचीमा फुटबल खेलाडीको सूची लामो छ । उनी कसरी यस्तो मौका पाउँछन् ?
काठमाडौँ — विश्व चर्चित खेलाडी भेट्न कति गाह्रो होला ? त्यस्ता खेलाडीको सुरक्षा व्यवस्थादेखि गोपनीयता उत्तिकै कायम गरिएको हुन्छ  । तर एक त्यस्ता भाग्यमानी नेपाली युवा छन्, जसले भेट्ने मात्र हैन दर्जनौं सेल्फीसमेत उनीहरूसँग खिच्न भ्याएका छन्  ।
उनी हुन् दोलालघाट काभ्रेका नवाङ लामा । कतारको दोहास्थित ‘द टर्च होटल’ मा छ वर्षदेखि काम गर्दै आएका उनले एक सय भन्दा बढी विश्व प्रसिद्ध खेलाडीहरूसँग सेल्फी खिच्न भ्याइसकेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढीचाहिँ फुटबलर छन् । यही साता मात्रै उनले ब्राजिलियन फुटबलर नेयमार जुनियरलाई भेटेर सेल्फी हान्न भ्याइहाले ।
उनले चर्चित डच खेलाडी आर्जेन रोबेन, सन् २०१४ को विश्वकप फाइनल खेलमा गोल गरेर जर्मनीलाई विजेता बनाएका मारियो गोजे, बार्सिलोनाका पूर्वकप्तान जाभियर हर्नान्डेजदेखि बार्सिलोनाका आर्टुरो भिडालसँग सेल्फी खिचेका छन् । त्यसैगरी, युभेन्ट्सका मिरालम पिजानिक, बार्यन म्युनिखका क्याप्टेन रोबर्ट लेवन्सकी, रियल मड्रिडका डिफेन्डर साल्गाडो, स्पानिस फुटबलर जाभी अलोन्सो, फ्रान्सका किङ्स्ले कोमनलाई पनि उनले आफ्नो सेल्फी फ्रेममा कैद गरेका छन् ।
अधिकांश खेलाडीहरू आफ्नो देशको जाडो छलेर कतारमा खेल अभ्यास गर्न आउँछन् । केही घाइते खेलाडीहरू उपचारका लागि आउने गर्छन् । गम्भीर घाइते भएका खेलाडीहरूको उपचारका लागि दोहास्थित आस्पेक्टेड अस्पताल संसारमै प्रसिद्ध छ । खेल अभ्यास गर्नका लागि आउने होस् या उपचारका लागि आउने हुन् । प्रायः यस्ता सबै खेलाडी ‘द टर्च होटल’ मै बस्ने गर्छन् ।
होटलका सबै कर्मचारीले खेलाडी भेट्ने अवसर कहाँ पाउँछन् र ? तर उनी अरूभन्दा भाग्यमानी छन् । भेट भएका अधिकांश खेलाडीहरूसँग छोटो मीठो गफगाफ गर्न पाउँछन् । ‘भेट भएपछि प्रायः सबैलाई आफ्नो परिचय सुरुमा दिन्छु,’ नवाङले फेसबुकमा भने, ‘धेरैले नेपालको नाम लिँदा नेपालबारे थाहा छैन भन्छन् । त्यतिखेरचाहिँ दुःख लाग्छ ।’ उनले अधिकांश खेलाडीहरू रसिक पाराको हुने बताए । जिस्किने, होहल्ला गर्दै रमाउनेहरू धेरै हुने गरेको उनको अनुभव छ ।
उनीहरूको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा हुन्छ । त्यसैले जो कोहीलाई उनीहरूसँग भेट गर्न दिइँदैन । होटलका विश्वासिलो कर्मचारी भएकै नाताले उनले प्रायः खेलाडीसँग देखभेट गर्ने अवसर पाउँछन् । सबैसँग सेल्फी खिच्ने अवसर त जुर्दैन । तर जुरेको अवसर छुटाउँदैनन् । ‘केही महिना अघि माक्रै त्रिस्टियानो रोनाल्डो पनि तीन दिनका लागि आएका थिए ।’ उनले भने, ‘तर उनीहरूसँग देखादेख भयो । भेटघाट गर्ने र बोल्ने समय मिलेन ।’ मेस्सी आउँदा पनि रोनाल्डोकै जस्तो भयो ।
सन् २०२२ मा कतारमा विश्वकप फुटबलको आयोजना हुँदै छ । अरबी मुलुकमा आयोजना हुने पहिलो विश्वकपसमेत हो । त्यसैले कतारको हावापानीसँग अनुकूलित हुनका लागि पनि संसारका प्रसिद्ध खेलाडीहरू अभ्यासका लागि बेलाबेलामा पुग्ने गर्छन् । यस्ता विश्व प्रसिद्ध खेलाडीहरूसँग सेल्फी खिच्न पाएका नवाङलाई स्थायी रूपमा नेपाल फर्किसकेपछि सबै खेलाडीहरूसँगको तस्बिर मिलाएर एउटा ठूलो पोस्टर बनाउने रहर छ । जुन पोस्टर उनको जीवनको उत्तरार्द्धसम्म ‘मेमोरी’ बनोस् ।
प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ११:४७
मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा नझोस
काठमाडौँ — सरकारले नेक्रवित्रम चन्द समूहको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि पैदा भएको तरंगले सबै क्षेत्रलाई गम्भीर बनाएको छ  । यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजबाट आआफ्नै ढंगका अभिव्यक्ति आइरहेका छन्  ।
सीके राउतसँगको ११ बुँंदे सहमति हुनुअघि यसरी प्रतिबन्ध लागेको हुन्थ्यो भने यसले ल्याउने तरंगको परिणामले अहिलेको आकार लिन सक्दैनथ्यो । देश टुक्र्याउने कुराको अगुवाइ गर्दै खुलेआम असंवैधानिक गतिविधि गर्ने व्यक्तिसँग सरकारले जुन चासोसाथ सहमति गरेर देखायो, त्यो ठीकै हो । चन्द समूहलाई सहमतिको घेरामा ल्याउन सक्नुमा नै सरकारको कार्यकुशलता प्रस्टिन्थ्यो । यस समूहसँग सहमतिको कुरा हुनै सक्दैन जस्तो गरी सरकार गालीगलौजमा उत्रनु र कडा खाले अभिव्यक्ति आइरहनुलाई आम मानिसले रुचाएका छैनन् । सरकारका पार्टीभित्रकै वरिष्ठ नेताहरू यसमा असहमत देखिन्छन् ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
सरकारले आफ्नो समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बुधबार बेलुकी पार्टी महासचिव चन्दले विज्ञप्ति जारी गरी ‘सत्ताका सामु झुक्दैनौं, दमन गरे मुखतोड प्रतिरोध गर्न हामी तयार छौं’ भनी सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । हतियारसहित भेटिए गोली हान्नू भनी सरकारले सुरक्षा निकायलाई दिएको निर्देशनका कारण मुलुक फेरि गृहयुद्धमा फस्ने संकेत देखिएको छ । संक्रमणकालीन परिस्थितिमा दुवैतर्फबाट संयम अपनाउनु जरुरी छ । साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ हुनु हुँदैन । कतिखेर कहाँ विस्फोट हुन्छ, थाहा हुँदैन । सर्वसाधारण ढुक्कसँग हिँड्न सक्ने वातावरण छैन । एनसेलमा भएको विस्फोटमा सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ । दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गरी समृद्ध नेपाल बनाउँछ भन्ने आम आशालाई सरकारी कार्यशैली र पछिल्ला गतिविधिले निराशामा परिणत गरेको छ । सर्वसाधारणले निडर भई आफ्नो दैनिकी गर्न नपाउने हो कि भन्ने त्रास बढेको छ । सरकारले वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गरी आम नागरिकको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ । चन्द समूहले पनि चन्दा आतंक, विस्फोट र आपराधिक गतिविधि छाडी वार्ताको बाटोबाट आफ्ना माग सम्बोधन गराई आम जनताको मन जित्नुपर्छ ।
– एचपी अधिकारी, रत्ननगर–१६, चितवन
सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयले कतै नेपाल फेरि द्वन्द्वमा त फस्दै छैन ? यो आम चिन्ताको विषय भएको छ । चन्द नेतृत्वको माओवादी पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकार र विप्लवबीच जुहारी चलिरहेको छ । दुवैतर्फबाट आएका हुंकारले समाजले फेरि युद्धको सामना गर्नुपर्ने त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ । सम्पूर्ण नेपालीलाई थाहा छ, ‘हिंसाको भविष्य छैन, शान्तिको विकल्प हुन्न ।’ सरकारले आउने दिनमा आफ्ना निर्णय कुनै उखान–टुक्काका भरमा नभई सुझबुझसाथ गर्न जरुरी छ । अन्यथा यो बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि असफल नहोला भन्न सकिँदैन ।
फागुन २९ गते कान्तिपुरको मुखपृष्ठमा ‘चन्दको गतिविधि प्रतिबन्धित’ समाचार प्रकाशित भएको छ । प्रतिबन्धित त यहाँ सबै विद्रोही पार्टी हुँदै आएका छन् । कुनै समयमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी पनि प्रतिबन्धित थिए । जोसँग संकल्प, शक्ति र सिद्धान्त थियो, ती कामयाब भए । यसअघि पनि सरकारले नेकपा माओवादीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । संकल्प, शक्ति र सिद्धान्त भएकाले त्यो सफल भयो । चन्दले पनि यी तीन कुरालाई साबित गर्नसके सफलता पाउनेछन् । उनको संगठन सातै प्रदेशमा छ । यदि उनले जनता रिझाउन सके भने त्यो संगठन मजबुत हुनेछ ।
सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई चेतावनी दिएका छन्— कसैले फेरि २०५२ सालको प्रचण्ड बन्न खोजे पार लाग्ने छैन । तर तिनै प्रचण्डले केही दिनअघि भनेका थिए— फेरि माओवादी जन्मिन सक्छ । त्यसले विप्लवको मनोबल अवश्य बढायो होला । खोलाले बगाएका हतियार उनीसँंग नै छन् । सरकारले ज्यादती गर्‍यो भने उनी अर्को देशमा पनि पस्नेछन् । अतः सरकार जसरी सीके राउतसंँग सहमतिमा पुग्यो, त्यस्तै सहमति विप्लवसंँग पनि गर्न प्रयास गर्नुपर्छ । बेलैमा सहमति हुन सकेन भने चन्द अर्को अस्थिरताको पात्र बन्ने बेर लाग्दैन ।
प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ११:४३